ပဉ္စမမြောက် ဧ၀ံဂေလိသတင်းကောင်း | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 10/11/2011
Posted in: က်မ္းစာေလ့လာျခင္း.	Tagged: က်မ္းစာ, ရင့္က်က္, ဧ၀ံေဂလိ.	Leaveacomment
ငါ့စကားကို နားမထောင်ဘဲလျက် ငါ့ကို သခင်၊ သခင်ဟု အဘယ်ကြောင့်ခေါ်ကြသနည်း။ (လုကာ ၆း၄၆)
“တပည်တော်”ဟူသော စကားလုံသည် ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်များအားလုံးနှင့် မသတ်ဆိုင်ပါ။ ခရစ်တော်၏ ခြေရာအတိုင်း လိုက်လျှောက်သူ၊ ခရစ်တော်ကို အရှင်သခင်အဖြစ် အုပ်စိုးခြင်းခံသူ၊ ခရစ်တော်၏ အစေခံအဖြစ် မိမိကိုယ်ကို မိမိ သတ်မှတ်ကာ အစေခံလုပ်ကျွေးသူကိုသာ “တပည့်တော်”ဟူ၍ ခေါ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ချစ်ခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ဆက်ကပ်ခြင်းအသက်တာနှင့် အသက်ရှင်သောသူကို သာ ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
ကျမ်းစာအုပ်ထဲတွင် ယေရှုခရစ်တော်ကို အရှင်သခင်အဖြစ်ဖေါ်ပြထားရာ အဓိပ္ပါယ်မှာ အမြင့်ဆုံးသော အချုပ်အခြာ အာဏာ၊ အရာခပ်သိမ်း၏ အထွတ်အမြတ်၊ ဖန်ဆင်းသမျှ အရာအားလုံး၏ ပိုင်ရှင်ဟု ဆိုလိုပါသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် ယေရှုခရစ်တော်ကို အရှင်သခင်အဖြစ်ခေါ်ရန် အခက်အခဲမရှိကြပါ။ သို့သော် ယေရှုခရစ်တော်အသက်ရှင်စဉ်အခါက ယေရှုခရစ်တော်ကို အရှင်သခင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုပါလျှင် အသက်ပေးရသည်အထိ အဖိုးအခ ပေးရကြသည်။ အရှင်သခင်ကို ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် (Kurios) ဟုခေါ်ကာ သာမန်ကျွန်ပိုင်ရှင်များအတွက် စာလုံးအသေးဖြင့် (lord) ဟုခေါ်ဆိုပြီး ရှင်ဘုရင် ဆီဇာကိုမူကား စာလုံးအကြီး (Capital letter) ဖြင့် (Lord) ဟုခေါ်ဆိုရပါသည်။
လမ်းလျှောက်သည့်အခါ စစ်သားများနှင့်တွေ့လျှင် “ဆီဇာသည် အရှင်သခင်ဖြစ်သည်”ဟု ဆိုလျှင် တဖတ်က “ဟုတ်ပါသည်။ ဆီဇာသည်သာလျှင် အရှင်သခင်ဖြစ်သည်”ဟု ၀န်ခံပြောဆိုရပါသည်။ သာမန်လူများအတွက် အခက်အခဲ မရှိသော်လည်း ခရစ်ယာန်များအတွက်မူကား ပြဿနာကြီး တစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စစ်သားများက “ဆီဇာသည် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်”ဟု နှုတ်ဆက် ပြောဆိုလျှင် ခရစ်ယာန်များက “မဟုတ်ပါ။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်သာလျှင် အရှင်သခင်ဖြစ်သည်” ဟု ပြန်လည်ပြောဆို ကြသောအခါ အသက်ဘေး အန္တရယ်ကြုံတွေ့ရလေတော့သည်။ ဤမျှလောက် ဖော်ပြရေးသားသည်နှင့်ပင် ရှေးယခင်အခါက ယေရှုခရစ်တော်ကို အရှင်သခင်အဖြစ် လက်ခံယုံကြည် ၀န်ခံမိလျှင် အသက်အန္တရယ်ရှိကြောင်း သဘောပေါက်လောက်ပြီ ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာပါ ဧ၀ံဂေလိတရားသည် နိုင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သော သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ အလားတူပင် ထိုသတင်းကောင်းသည် ယေရှုကိုယ်တော်မြတ်ကို အရှင်သခင်၊ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်စိုးသူ၊ အဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုထားသည်။ ယေရှုကိုယ်တော်သည် အရာခပ်သိမ်း၏ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်ဖြစ်သည်။
သို့သော် ယနေ့ ဧ၀ံဂေလိဟောပြောသူများက “ယေရှုခရစ်တော်ကို မြည်းစမ်းကြည့်ပါ။ သူ့ကိုယုံကြည်ပြီး ဆုတောင်းရင် သင်တောင်းတဲ့အတိုင်းပေးလိမ့်မယ်။ ကျန်မာလာမယ်။ အောင်မြင်လာမယ်… “အစရှိသဖြင့်ဟောပြောသံကို ကြားဘူးပါသည်။ အတိအလင်းဆိုရလျှင် မိမိကိုယ်ကျိုးစီးပွားကို ဦးစားပေးကာ ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံ ကိုးကွယ်နေကြသည်။ ဆုတောင်းသမျှ သည်လည်း အမှုတော်အတွက် လုံးဝမပါဘဲ မိမိကောင်းစားရေးကိုသာ နာမတော်ကို အမှီပြုပြီး ဦးစားပေး ဆုတောင်းနေကြသည်။ မှားယွင်သော နှလုံးသားများဖြင့် ဆုတောင်းနေကြသည်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင် ဟောပြောမှုများမှာ မှားသည်ဟု မဆိုလိုချင်သော်လည်း ယုံကြည်သူများအတွက် မှားယွင်သော နှလုံးသားကို ဖြစ်စေသည်။ ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်သမျှသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်၊ ယေရှုသခင်၏ အမှုတော်လုပ်ငန်းများကို ဦးတည်ရမည်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်တော်မြတ်ကို ယုံကြည်လက်ခံရာတွင် ထိုသခင်၌ ရှိသောအရာအားလုံးကို ယုံကြည်လက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသခင်ကို ယုံကြည်လက်ခံသည့်အခါ ထိုသခင်သည် ကျွန်တော်တို့အတွက် ကယ်တင်ရှင်နှင့်အနာရောဂါကို ငြိမ်းစေသောအရှင်ဖြစ်သည်ကား မှန်ပေ၏။ ထိုသခင်၏ နာမ၌ ဆုတောင်းနိုင်သည်ကား မှန်ပေ၏။ သို့သော် ယေရှုခရစ်တော်ကို အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီး မိမိလိုချင်သည့် အပိုင်းလောက်ကိုသာ ရွှေးယူရန်အတွက်တော့ မဖြစ်နိုင်ချေ။
ကျမ်းစာတွင် ရှင်မဿဲ၊ ရှင်မာကု၊ ရှင်လုကာ နှင့် ရှင်ယောဟန်ဟူသော ဧ၀ံဂေလိကျမ်း (၄)ကျမ်းရှိပါသည်။ ထိုကျမ်းလေးကျမ်းတွင် ရှိသော ခရစ်တော်၏ အသက်တာနှင့် ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းကို အပြည့်အ၀ ခံယူလိုက်လျှောက်သောသူ ဖြစ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထိုယုံကြည်သူများကို တပည့်တော်စစ်များဟု ခေါ်ဆိုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ယနေ့ယုံကြည်သူများသည် ထိုဧ၀ံဂေလိ ကျမ်း (၄)ထဲမှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော အပိုင်းများကိုသာ ထုပ်နုတ်ပြီး ခံယူကြသည် မကြိုက်မနှစ်သက်သော အပိုင်းများကိုမူကား ချန်လှပ်၍ထားကြသည်။
ပဉ္စမမြောက် ဧ၀ံဂေလိသတင်းစကားဆိုသည်မှာ ဧ၀ံဂေလိကို ဦးစားပေးသော ခရစ်ယာန်များက မူရင်း ခရစ်ဝင်ကျမ်း လေးကျမ်းအနက်မှ မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်သောအပိုင်းများကို စုစည်းကာ ထုပ်နုတ်ကာ ပြုစုထားသော ကျမ်းဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်၊ နောင်တ၊ ယုံကြည် စသည့် စကားလုံးများကို ဖယ်ရှားကာ မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်သော စကားလုံးများဖြင့် သမ္မာတရားဟု အမည်တပ်ကာ ၄င်းတို့၏ မူပိုင် ဧ၀ံဂေလိတရားအဖြစ် ဟောပြောဝေငှကြသည်။
ပေတရုပြောသော ဧ၀ံဂေလိတရားကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
ထိုကြောင့် သင်တို့သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ကွပ်မျက်တော်မူသော ယေရှုကို ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်အရာ၌လည်းကောင်း၊ အစိုးရတော်မူသော အရှင်အရာ၌လည်းကောင်း ခန့်ထားတော်မူသည်ကို သိမှတ်ကြလော့။ (တမန်တော် ၂း၂၆)
အလားတူ ရှင်ပေါလုပြောသော ဧ၀ံဂေလိသတင်းစကားကိုလည်း ကြည့်ပါဦး။
အဘယ်သို့နည်းဟစူမူကား သင်သည် သခင်ယေရှုကို နှုတ်ဖြင့် ၀န်ခံ၍ ဘုရားသခင်သည် သူကို သေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူပြီဟု စိတ်နှလုံးထဲ၌ ယုံကြည်လျှင် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ (ရောမ ၁၀း၉)
သည်လောက်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တင်ပြလိုသော ပဉ္စမမြောက် ဧ၀ံဂေလိသတင်းစကား အကြောင်းကို သင်ရိပ်မိ သိရှိပြီ ဟု ယူဆမိပါသည်။ ပိုမိုထင်ရှားစေရန် ထပ်မံတင်ပြလိုပါသေးသည်။ လုကာကျမ်းတွင် “သိုးစုငယ် သင်တို့သည် မကြောက်ကြနှင့်။ သင်တို့အဘသည် သင်တို့အား နိုင်ငံကို ပေးခြင်းငှာ အလိုရှိတော်မူ၏။” (လုကာ ၁၂း၃၂)။ ထိုကျမ်းပိုဒ်ကို ကျွန်တော်တင်သာမက လူတိုင်းကြိုက်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင် ထိုကျမ်းချက်ဖြင့် အကြိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာ တရားဟောဘူးသည်။ သို့သော် ထိုကျမ်းချက်၏ နောက်တွင် ကပ်လျှက်ပါလာသော ကျမ်းပိုဒ်မှာ “သင်တို့ ဥစ္စာများကို ရောင်း၍ ဆင်းရဲသားတို့အား စွန့်ကြဲကြလော့။” (လုကာ ၁၂း၃၃)။ ထိုကျမ်းချက်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ခွန်းအားရသောသူ မရှိသလောက်နည်းပါနေပြီး တရားဟောဆရာများကလည်း လစ်လျှူရှုထားကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မိမိတို့ မခံယူနိုင်သော အပိုင်းဖြစ်နေသောကြောင့်တည်း။ ထိုအပိုင်းကိုမူကား ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်နှစ်သက်သော ပဉ္စမြောက် ဧ၀ံဂေလိကျမ်းတွင် ထည့်မထားသောကြောင့် ထိုကျမ်းပိုဒ်ကို မည်သူကမျှ ဟောပြောသွန်သင်ကြခြင်း ခွန်အားယူကြခြင်တို့ မရှိကြချေ။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် သမ္မာတရား တ၀က်လောက်ကိုသာ လက်ခံထားကြသူများဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုခရစ်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သာ လက်ခံကြပြီး အရှင်သခင် အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံရန်မူကား နှောင့်နှေးနေကြသည်။
ယေရှုသည် သူ့အသက်ကို မသတ်ရန် ဟောပြောသွန်သင်ထားပါသည်။
ယေရှုသည် ကိုယ်နှင့် စပ်ဆိုင်သောသူကို ကိုယ်နှင့်အမျှချစ်ရန် သွန်သင်ထားပါသည်။
ယေရှုက ဥစ္စာပစ္စည်းများကို ရောင်း၍ ဆင်းရဲသူများကို ပေးကမ်းရန်သွန်သင်ထားပါသည်။
အထက်ပါ ဟောပြောသွန်သင်ချက်များကို လည်း အမှန်တကယ်လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ရန် သွန်သင်ထားပါသည်။ ပဉ္စမမြောက် ဧ၀ံဂေလိသတင်းစကားများသည် လူတို့၏ အကြိုက်များသာ ဖြစ်နေကြသည်မှာ ထူးခြားဆန်းကြယ်လှပါသည်။
မိတ်ဆွေ သင်လည်း သမ္မာကျမ်းစာမှ ကျမ်းချက်များကို မခံယူနိုင်၊ မလိုက်လျှောက်နိုင်သော အပိုင်းများရှိလျှင် မခံယူဘဲ နေနိုင်ပါသည်။ မကြိုက်သောအရာများကို ငြင်းပယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ သို့သော် သင်ကြိုက်သော အရာများကိုသာ ယူထားသဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် ယှဉ်သော ၀မ်းမြောက်ဘွယ် သတင်းကောင်းတော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။
Juan Carlos Ortiz ၏ Disciple စာအုပ်မှ ပထမဦးဆုံးအခန်းဖြစ်သော (The fifth gospel) မှ အချို့အပိုဒ်များကိုယူကာ ဆီလျော်သလို ထုပ်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
← ဘုရားသခင်၏ ကြီးမြတ်ခြင်းကို ဖော်ပြခဲ့သော ဟေရှာယ